Lalao Video Malaza Ahitana Ankizy Japoney Mahita Matoatoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2014 8:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, polski, Ελληνικά, 日本語
Pikantsarin'ny Yo-Kai Watch Anime, avy amin'ny fantsona Youtube LEVEL 5
Hatramin'ny namoahana azy herintaona lasa izay, nanintona ny sain'ny ankizy manerana an'i Japana ny “Yo-Kai Watch,” lalao an-dahatsary (video) lalaovina amin'ny Nintendo 3DS. Niainga tamin'ilay lalao,dia nisy mihitsy ireo mpankafy sasany manome tsiny ny fisehoan'ireo endrik'olona malaza tia sotasota amin'ny zavatra ratsy na tsy mahazatra mety hitranga eo amin'ny fiainana tena izy.
Nanjary lasa andiana sarimiaina malaza ao Japàna ilay lalao ary toa natao ho lasa kolontsaina iombonana fanondrana avy ao amin'ny nosy-firenena. Lasa hita eny rehetra eny ireo endrik'olona malaza – amin'ny sary amboarina antserasera hampihomehy, amin'ny voatavon'ny Halloween sy amin'ny McDonald.
Amin'ny kolontsaina Japoney, ny yokai dia milaza ny ambiroan'ny voambolan'ny fanahy, avy amin'ny avelo ka hatramin'ny fosa miovaova endrika. Ny sarimiaina “Yo-Kai Watch” dia fomba lavorary hianarana ireo karazam-panahy mihaodihaody eo amin'ny saina amam-panahy Japoney, araka ny hita amin'ny alalan'ny mason'ilay zazalahy antsoina hoe Keita. Araka ny filazan'ny Wikipedia:
Yo-Kai… gives Keita a device known as the Yo-Kai Watch. Using this, Keita is able to identify and see various different Yo-Kai that are haunting people and causing mischief. Together, Keita and Whisper start making friends with all sorts of Yo-Kai, which he can summon to battle against more ill-intentioned Yo-Kai that happen to live in his town, haunting the residents and causing terrible trouble.
Manome fitaovana fantatra amin'ny anarana Yo-Kai Watch hoan'i Keita ny Yo-Kai. Amin'ny fampiasana izany, afaka mahafantatra sy mahita karazana Yo-Kai izay mihaodihady eo amin'ny olona sy ny voka-dratsy aterany i Ketia. Nanomboka nahazo namana vaovao mitondra ireo karazana Yo-Kai i Keita sy Whisper rehefa tafaraka, izay azony ampiasaina hiadiana amin'ireo Yo-Kai ratsy tonga honina ao an-tanànany, sy manalokaloka amin'ireo mponina ary miteraka fikorontanana mahatsiravina.
Manasongadina hira marani-tsaina sy mahatarika ilay sarimiaina ka nanjary lasa hira pop ara-kolontsaina malaza :
Misy ny antony maro mahatonga ny “Yōkai Watch” malaza dia malaza ao Japàna.
Level 5, mpandrafitra lalao ikoizana nanangana ny Yo-Kai Watch, no niasa mafy mba hametrahana transmedia franchise [miparitaka amin'ireo karazana fampitan-kafatra hafa] hampafantarana ilay lalao. Amin'ny fampifandraisana ny “Yōkai Watch” tamin'ireo media isan-karazany, tamin'ny lalao video sy ny mozika pop, no nahafahan'i Level 5 niankina amin'ireo fantsona maro dia maro hamarotany ny vokatra.
Tamin'ny volana Septambra, natomboka tao amin'ny McDonald ny fizarana karatra fanangona ahitana ny zavamisy (sakafo) azo hanina sy ny vidiny ankilan'ny sarin'ireo mpandray anjara ao amin'ny “Yō’ kai Watch”, ka nanamontsana ny hatramin'ny 300 isanjato ny vivanivam-bola maty nandritra ny dimy andro voalohany.
— TM (@tkg_sub) September 6, 2014
Manontany tena aho hoe naninona ny McDonald no feno olona ary fantatro fa noho ny karatra fanangona “Yōkai Watch”.
Nanamarika ny fiantraikan'ny “Yo-Kai Watch” eo amin'ny kolontsain'ny sarambabe ireo mpisera Twitter marobe:
— ぱちぇ@11/29 垢４周年 (@8cye) September 30, 2014
Toa misy ny fitomboana haingana dia haingana eo amin'ireo ankizy ny manome tsiny ireo matoatoa amin'ny zavatra rehetra sy izay zava-tsy mahazatra miseho.
Amin'izao fotoana izao, misy ny sary natao hihomehezana manome tsiny an'i Koma-san, endrika iray ao amin'ny fampisehoana, amin'izay olana madinika rehetra na zava-mahasosotra iainana andavanandro:
あと今後ソフトクリームが一巻き足りなくても、コマさんが食べたと思えば許せる — ペンギンですけど何か (@penguin_desuga) August 26, 2014
Lany ny gilasy, saingy mihevitra aho fa voavela heloka ny rehetra- nohanin'i Koma-san izany.
Mazava loatra fa Halloween ny fotoana nampirongatra indrindra izany. Nanjary sary malaza amin'ny voatavo Halloween i Jabanyan, iray amin'ireo endrika hita ao amin'ny sarimiaina:
— こだれでら (@kodaredera) September 1, 2014
Nasokitra sarivongana voatovo Jabanyana izahay androany
Fifindràmonina 3 herinandro izay